Ngwa igwe egwuregwu igwe Suppliers na Factory - China Metal egwuregwu ngwa ndị na-emepụta ihe
Ọrụ dị arọ: E ji ígwè niile rụọ ọrụ SUP na surfboard iji nagide ịdị arọ nke bọọdụ dị arọ na bọọdụ dị ogologo na-emepụta akwa nchekwa nchekwa paddle siri ike na nke na-adịgide adịgide.Rack dị sentimita 18 n'ogologo na ogwe aka nke ọ bụla iji kwado bọọdụ ahụ dị sentimita 25 n'obosara.Akụkụ ọ bụla nke rack nwere ike iburu ihe ruru kilogram 75.
Enwere ike idozi-A na-emegharị akwa ahụ elu na ala site na sentimita 10 ruo 18.
Nchedo n'ozuzu: ogwe aka nke ọ bụla gụnyere ya na oche SUP anyị nwere akwa akwa akwa iji kpuchido ma gbochie mmerụ ahụ a na-eme na bọọdụ gị n'adịghị ka ọtụtụ akwa akwa akwa.Ihe nchara anyị na-adịgide adịgide na nchara na-eguzogide ebe obibi mmiri nnu.
Zuru oke maka ọtụtụ bọọdụ dị iche iche: n'adịghị ka ọtụtụ SUP racks maka nchekwa mgbidi, onye na-eji paddle a nwere ike ijide ihe ruru 25.''bọọdụ sara mbara ma nwee ike ijide bọọdụ sọfụ, paddleboard, bọọdụ ogologo, skis, na ụfọdụ Kayak.Nhazi ngwa ngwa ma dị mfe: ọtụtụ ebe a na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala na-esi ike ijikọta ọnụ.Ugwu paddle anyị dị mfe ịtọlite!Ngwongwo ígwè na ngwaike a na-enye nwere ike ịdị mfe na-agbanye n'elu ụlọ na ogwe aka ndị a na-ekpuchi ekpuchi nke rack na-abanye n'ime oghere maka nhazi dị nchebe ma dị mfe.
Imepụta: Nhazi ihe nrite izizi.
Mecha: Uzuzu na-adịgide adịgide kpuchiri maka ụdị ojii, Agba ọla ọcha ejiri aka mee maka ụdị igwe anaghị agba nchara.
oké ígwè ihe,gaghị ehulata n'elu mfe.Rusty free.Durable.
Anyị anọwo na nhazi na mmepụta ihe ngosi ihe nrite maka ihe karịrị afọ 10. N'ime ihe karịrị 200+ na-emepụta ihe karịrị 30 egwuregwu egwuregwu dị iche iche.
Ihe nrite egwuregwu maka ihe nrite egwuregwu dị iche iche
Design: Original metal shelf imewe, dị mfe ma mara.
Ogo dị: 40cm L, yana obere ihe ndọta abụọ iji jide bibs ma ọ bụ foto.
Ngwucha: ntụ ntụ na-adịgide adịgide kpuchie na ojii.
A na-eji ya eme ihe: iko ngosi, obere ihe ndozi, ihe nrite kwụgidere, jide bibs ma ọ bụ foto.
Shelf mgbidi ọla maka igosipụta Trophy na nrite.
Shelf trofi osisi nwere nko nrite
Kere: Multi-arụ ọrụ osisi shelf imewe, ukwuu maka ngosi trofi na nrite.
Ogo: Emere ya site na osisi pine siri ike, nke ejiri aka mee ya.
Size :17" L. nwere nko ígwè 25 iji jide nrite ma ọ bụ akpa, igodo wdg.
Ngwugwu: 1pc/box.12pcs/carton.Nabata ngwugwu igbe onyinye ahaziri ahazi.
ONYE na-agba ọsọ nrite
Atụmatụ nrite nrite RUNNER dị mfe ma maa mma.
Mgbodo osisi nkwudo mgbidi, Onye nhazi nko igodo, Osisi ite Hangers, Igwe mgbidi ọla, Ngosipụta njide olu, Nko njide igodo,